Guddoomiya Kuxigeenka Aqalka Sare oo wada olole 50 kun oo buug loogu yaboohayo Ardayda Dhadhaab – Kalfadhi
Warqad furan, oo uu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Sanatar Abshir Axmed (Bukhaari) u diray dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigta ama ka baxay, ayaa waxaa ku qoran baaq uu ku dalbayo in Ardayda Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab lala gaaro buugaag, halkaas oo ay 10-kii ardaydba isla wadaagayaan hal buug. Farrintiisa ayaa u dhigan sida hoose:-
Dhalinyaro, sida aad dhamaantiin la socotaan in ka badan labo milyan oo ka mid ah dadkeena ayaa ka barakacay guryahoodii, waxayna ku jiraan muddo hadda soo afjareysa sodon sano xeryaha barakacayaasha ee dalka gudihiisa iyo xeryaha qaxootiga eek u yaala Geeska Afrika, iyo kuwo ka baxsan, sida Xeryaha Qaxootiga Yeman.
Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR) ayaa ku qiyaastay in ku dhaw hal milyan oo Soomaali ah in ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga gobolka Geeska Afrika iyo Yeman, kuwaas oo intooda ugu badan ay ku nool yihiin nolol adag.
Gaar ahaan, ardayda wax ka barata dugsiyada kala duwan ee Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab waxay dhibaato weyni ka haysataa helitaanka buugaagta maadooyinka ay ku bartaan dugsiga. Tobankii ardayba waxa ay isla wadaagaan hal bug, taas oo aad uga hor istaageysa in ay xaqiijiyaan hankooda waxbarasho.
Dhalinyaro, ardaydani, sida adiga oo kale, ayey aad u jecel yihiin in ay ka guul gaaraan waxbarashadooda, si ay u helaan nolol ka fiican nolosha saboolka iyo silica ah ee ay hadda ku jiraan. Intaa waxaa dheer, waxa ay aad ugu han weyn yihiin in ay gacan weyn ka geystaan dib-u-dhiska dalkeena, si rajo loogu abuuro jiilalka mustaqbalka.
Dhalinyaro, waxaan ugu yeerayaa mid kasta oo idinka mid ah in uu u iibiyo ardaydaas dhibaatadu haysato, ee maanta aad ugu baahan garab-istaagga, ugu yaraan hal buug, adiga oo sidoo kale ku boorinaya xubnaha qoysaskiina iyo saaxiibbadaada kale in ay iyaguna ka qeyb-qaataan dadaalkaas buug uruurinta ah, si loo gaaro yoolka saamiga buugaagtaas oo gaaraya ilaa iyo 50 kun oo buug, oo ka kooban maadooyinka dugsiga sare.
Gaarsiinta buugaagtaas ardayda Dhadhaab waxaad kala xiriiri kartaan dhalinyarada horseedka ka ah hindisaha ay ku magacaabeen Dhadhaab Book Drive. Kooxdaan waxa ay ka kooban yihiin dhalinyaro horay ugu soo noolaa, kuna soo qaatayb qeyb ka mid ah waxbarashadooda Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab.
Dhalinyaro, marka aad ka jawaabeysaan qeylo-dhaantan, ma ahan oo kaliya inaad buug u gadeysaan dhalinyaro kale oo walaalihiin ah, laakiin waxa aad gudaneysaan waajibka mas’uuliyad weyn oo idinka saaran bed-qabka iyo baraaraha da’yartaas Soomaaliyeed, oo kula nool nolol adag meel ka baxsan dalka hooyo.
Dhalinayro, dhab ahaantii, tani waa mas’uuliyad culus oo saaran dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, gaar ahaan inta dareenka leh, waana mas’uuliyad ay horay u dayaceen jiilka garwadeenka inoo ah qeybihiisa kala duwan.
Ugu dambeyn, dhalinyaro, waxaan aad u aaminsanahay in aad siyaabo kala duwan uga qeyb-qaadan doontaan arrintan qiimaha iyo qaayaha badan.
Sanatar Abshir Axmed
Guddoomiye Kuxigeeka 1-aad ee Aqalka Sare
Madaxweynaha Puntland oo Garowe ku qaabilay safiirka Sweden ee Soomaaliya